Ukuqhubeka kabusha kwezinqubo zebhizinisi kungaba inhlanganisela yamathuluzi nezindlela eziba nethonya elikhulu ekuthathweni kwezinqumo ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwebhizinisi. Ukuze wenze lokhu, ukuhlaziywa kufanele kwenziwe, ngokusho kwemiphumela yalokho ushintsho olufanele lwenziwa kwimisebenzi yebhizinisi lebhizinisi.
Ukuqhubeka kabusha kwezinqubo zebhizinisi zebhizinisi ngenhloso yokuthola ukuthuthukiswa okubukhali kwezinkomba zokusebenza ezikhona kusho ukuletha izinguquko eziyisisekelo ezindleleni ezikhona. Yilezi zinguquko ezingasetshenziswa ngempumelelo ngabaphathi uma kuthuthukiswa isu lamasu okuthuthukisa amasha.
Imvelo enhle yezinto ezintsha ezakhiwa ihlanganisa ukuletha izinqubo ezintsha zebhizinisi emisebenzini yezomnotho yalolu daba, okubhekiswe ekudalweni nasekuphathweni kwezinto zobuchwepheshe. Ngakho-ke, ukuqhutshwa kabusha kwezinqubo zebhizinisi kungacatshangwa kusuka ezikhundleni ezimbili:
- indlela yokuphatha imisebenzi yebhizinisi lebhizinisi;
- ithuluzi lokuthuthukisa isu elisha.
Into yokubuyiselwa kabusha ingenye yezinto eziyinhloko zokuhlelwa komncintiswano webhizinisi - ubuchwepheshe bokuthuthukisa nokusebenzisa izinqubo zebhizinisi.
Njengendlela yokuphathwa kwebhizinisi, inqubo yebhizinisi yokuvuselela ihlanganisa izindawo ezinjalo zomsebenzi: ukuhlaziywa kwecebo lamanje; Ukusungulwa kwecebo elisha nelinokuncintisana ngale ndaba. Ukuphathwa kulezi zinqubo kubonisa izindlela ezimbili:
- Ushintsho olusungulwayo yilona uhlobo lwesigaba sokulungiselela ukuqaliswa kweminye imininingwane. Okokuqala, ukuhlaziywa okuyinkimbinkimbi kwenkampani yebhizinisi kwenziwa kwesikhundla sendlela yokuphatha eyodwa. Lapha, ukuxilongwa kwezinqubo zebhizinisi ezikhona nakho kwenziwa.
- Ubunjiniyela obuqondile, lapho isu elisha lebhizinisi laklanyelwe, ngokusekelwe ezinkambisweni ezintsha. Ukwakhiwa kwezinqubo zebhizinisi ezithuthukisiwe kuthuthukiswa futhi izindlela zezimali zichazwa. Ngenxa yalokho, umgomo oyinhloko kufanele uzuzwe - ukukhula kwamandla emisebenzi yenkampani ngenxa yokwanda kwesabelo sempahla yengqondo kanye nokuhlushwa kwemithombo yenkampani ezindaweni eziphambili zezobuchwepheshe.
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinqubo ezimbili ukuthi ukuguqulwa kobunjiniyela kulungiswa isisekelo sokudala amasu amasha, futhi indlela entsha isakhiwa ngendlela eqondile yokwakha nokusebenzisa isu elikhethiwe.
Le phrojekthi kufanele ibe ne-orientation enembile ehlonishwayo, eqaliswa ngokulandelana okuthile. Yingakho izinyathelo zezinqubo zebhizinisi zokuvuselela zingathunyelwa kuleli fomu elilandelayo.
Isigaba sokuqala . Ukuthuthukiswa kwethempelini yebhizinisi yebhizinisi elizayo kanye nokulinganisa okuhleliwe kokuncintisana kwayo. Ngalesi sigaba, izinhloso zezinhloso zebhizinisi kufanele zihlelwe ngendlela efanele futhi ukuchithwa kwazo kwesakhiwo kuqhutshwe, okuholela ekukhethweni kwezinhloso eziphambili kanye nesistimu yokuhlola, futhi ibeka izinjongo zokusebenza.
Isigaba sesibili. Ukuhlaziywa kwenqubo yebhizinisi edalwe ekuncintisaneni komsebenzi wamasu webhizinisi. Lapha, imisebenzi yokuhlaziywa iqhutshwa ngomgomo wokuguqulwa kabusha kohlelo lwebhizinisi elikhona. Ukuhlolwa okulinganisako nokulinganisa kweendlela ezikhona zokusebenza kwebhizinisi nakho kwenziwa. Ukuze uyiqhube, udinga ukuhlola amaphuzu abuthakathaka futhi aqinile, kanye nezinsongo ezenzekayo emisebenzini yendaba. Isakhiwo sokuphathwa komhlangano kufanele sihlolwe futhi, kufaka phakathi ukuhlolwa kokukhiqizwa kwenkampani, emisha kanye namandla okuhlakanipha.
Isigaba sesithathu. Ukuthuthukiswa komdwebo weqhinga eliphuthumayo kuhilela ukusetshenziswa kwamathuluzi okuqondisa ngqo. Kulesi sigaba, ukuqhubeka kabusha kwezinqubo zebhizinisi kugxila ekudaleni amaphrojekthi athile okufanele akhombise isakhiwo sezindleko kanye nenhloko yebhizinisi. Lapha, umthelela wephrojekthi entsha yebhizinisi kwimisebenzi yesikhathi esizayo yebhizinisi ihlolwe.